परिवर्तित समयसँगै स्वयंलाई बदल्नुहोस् ! | Kendrabindu Nepal Online News
१३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १३:४९
वर्तमान कठिन परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिवक्ता प्रेम रावतले आफ्नो सन्देशमार्फत निरन्तर मानिसहरूमा सचेतना र हिम्मतलाई अघि ल्याउने प्रयास गरिरहनु भएको छ । उहाँको भनाइबाट साभार गरिएको केही अँश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
यो कठिन समयलाई पार गर्नका लागि हामीले आफ्नो साहसलाई प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । हामीलाई त्यो प्रकाशको आवश्यकता छ जुन हाम्रो हृदयभित्र चम्किरहेको छ । फलतः अँध्यारो जंगलमा उज्यालो होओस् । बाहिरको परिस्थिति बदलियोस् या नबदलियोस् तर हामी स्वयंलाई त बदल्न सक्छौँ । यो कोरोना भाइरसको विषम परिस्थितिमा तपाईँ के कुरा बुझ्नुहोस् भने यस परिस्थितिका कारणले तपाईंको खुशीलाई ठेस नलागोस् । यस्तो अवस्थामा रहिरहँदा पनि तपाइँले आफूभित्रको सुख र आनन्दलाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ । यदि यस्तो भयो भने तपाईंको जीवनमा आनन्द नै आनन्द हुनेछ । त्यसपछि दुःखसँग डराउनु आवश्यक हुँदैन । मात्र ! सावधान हुनु आवश्यक हुन्छ ।
हामीले आफ्नो जीवनमा अघि बढ्नका लागि हिम्मत गर्नुपर्दछ । हामी समक्ष आउने समस्याहरू यति ठूला हुँदैनन् जसले गर्दा हामी यो कुरालाई पनि बिर्सन्छौँ– हरेक समस्याको समाधान साहसका साथ निकाल्न सकिन्छ र हामी अघि बढ्न सक्छौँ । हामीभित्र यो श्वास आइरहँदा अनि गइरहँदासम्म हामीमा त्यो शक्ति पनि यथावत् नै रहन्छ ! अनि, सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीले डराउनु आवश्यक छैन ।
आशाका साथ आफ्नो जीवनलाई बिताउनुहोस् । यो परिस्थितिका कारण जे जति पनि आज तपाईँ सिकिरहनु भएको छ, त्यसलाई नबिर्सनुहोस् । यस परिस्थितिमा धेरै मानिसहरू यसबाट डराइरहका पनि छन् । अनि, डराउन त डराएका छन् तर केही असर परेको पनि छैन । यो कुरालाई याद गर्नुहोस्, सतर्क रहने कुरा फरक हो अनि डराउने कुरा पनि फरक हो । यदि तपाइँ बाटो काटिरहनु भएको छ, बाटोको अर्कोतर्फ गइरहनु भएको छ भने सतर्क रहनुपर्छ । तर, डर लागेपछि तपाईं रोकिनु हुनेछ । रोकिनु भयो भने त दुर्घटना पनि हुन सक्छ ।
त्यसकारण जबसम्म तपाईंभित्र यो श्वास आइरहेको छ अनि गइरहको छ– यसलाई बुझ्नुहोस्, यसको कदर गर्नुहोस् । यसले तपाइँका लागि जीवन लिएर आएको छ । यसले तपाईंका लागि ल्याइरहेको समयमा तपाईं आनन्द लिन पनि सक्नुहुन्छ । हो, परिस्थिति तपाईं अनुकूलको छैन । तर, यसको अर्थ यो पनि होइन, तपाईंयस्तो अवस्थामा पनि कुनै राम्रो कुरा जान्नै सक्नुहुन्न । तपाईँसँग कस्तो धन छ, कस्तो चीज छ, तपाईंले चिन्नु भएको छैन ! तर, जब त्यस चीजलाई चिन्नु हुनेछ, त्यस चीजलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ तब मात्र यी सारा कुराहरू समाप्त हुनेछन् । अनि, तपाईंको जीवनमा आनन्द आउनेछ । आफूले आफूलाई चिन्नुहोस्, पहिचान गर्नुहोस् अनि यो जीवनलाई सफल पार्नुहोस् ।
(प्रेम रावत मानवता एवम् शान्तिका विषयमा चर्चा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता हुनुहुन्छ । उहाँलाई यस कार्यका लागि थुप्रै संस्थाहरूद्वारा शान्तिदूतको उपाधि पनि प्रदान गरिएको छ । आफ्नो सन्देशको चर्चाका अतिरिक्त उहाँले “द प्रेम रावत फाउन्डेसन” नामक एउटा परोपकारी संस्था पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ । यस संस्थाका थुप्रै कार्यक्रमहरूमध्ये “जनभोजन” पनि एक हो । यसबाहेक यस संस्थाले यस्तो विपत्तिमा पनि विपन्न मानिसहरूलाई राहतको सामग्री बाँड्ने कार्य गरिरहेको छ । उहाँको सन्देशका बारेमा थप जानकारीका लागि www.premrawat.com र प्रतिक्रियाका लागि [email protected] लाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।)
परिवर्तित समयसँगै स्वयंलाई बदल्नुहोस् !, प्रेम रावत
Prevपत्रकारिता क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न सभापति देउवाको माग
चौैरजहारी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सांसद विश्वकर्माको मागNext